Sida loo sameeyo otomaatiga guriga Arduino talaabo talaabo ah | Qalabka bilaashka ah
Sida loo abuuro otomaatiga guriga talaabo talaabo ah
Una qalabaynta guriga waa guri ka kooban laba nidaam, nidaam gudaha ah iyo nidaam dibadeed, kaas oo waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro, lagu xakameeyo laguna qalabeeyo wax kasta oo dhaca oo la xiriira guriga. Si tan loo gaaro, aaladaha casriga ahi waxay ku xiran yihiin nidaamyada ururiya macluumaadka aan u baahan nahay sidoo kalena ka jawaaba codsiyadayada.
Guusha otomaatiga guriga bilihii la soo dhaafay waxaa u sabab ah qiimaha aaladahaan oo aad hoos ugu dhacay waana ku mahadsan tahay Qalabka Bilaashka ah, qalab kasta waxaa lala qabsan karaa nooc kasta oo guri ama xaalad ah. Walxaha aan xitaa dhisi karno nafteena.
1 Waa maxay waxyaabaha aan u baahanahay si aan u abuuro otomatigayga gurigayga?
2 Maxaan sameeyaa si aan u abuuro laydh caqli badan?
3 Maxaan sameeyaa si aan u hubiyo otomatigayga gurigayga?
4 Maxaan sameeyaa si aan gurigayga u-qaboojiyo?
5 Maxaan sameeyaa si aan gurigayga u qurxiyo?
6 Sidee loo heli karaa khamriyeene otomatigayga gurigayga?
7 Tan ma la horumarin karaa?
Waa maxay waxyaabaha aan u baahanahay si aan u abuuro otomatigayga gurigayga?
Kahor intaanan kahadlin mashaariicda-yar yar ama aaladaha naga caawin doona abuurista otomatiga guriga, waxaan sameyn doonnaa liistada waxyaabaha caadiga ah ee aan ugu baahan doonno sameynta otomaatiga guriga.
Marka ugu horeysa waa in la helaa router iyo xiriir internet xoog leh oo ka shaqeeya guriga oo dhan, ma jiri karaan aagag dhintay ama qolal uusan tallaabada router gaari karin. Xaalado badan uma baahnin xiriir internet, laakiin waxaan isticmaali doonnaa router. Xaaladaha kale, sida amniga guriga, waxaan u baahanahay marin internet, marka router-ka iyo marin-u-helka intuba waa muhiim.
Cunsur kale oo caam ah ayaa ah Guddiga Raspberry Pi. Marka lagu daro inay lagama maarmaan u yihiin mashaariicda qaar, guddiga Raspberry Pi wuxuu u shaqeyn karaa sidii adeege maamusha dhammaan codsiyada iyo amarrada walxaha caqliga kala duwan. Qodobka wanaagsan ee isticmaalka Raspberry Pi waa cabirkeeda yar, awoodeeda iyo qiimaheeda oo hooseeya.
Arduino Yún iyo Arduino UNO Waxay sidoo kale noqon doonaan wehel lama huraan ah si loo abuuro otomatiga guriga. Ama in la xakameeyo hawlgalka qaboojiyaha ama in la xakameeyo qufulka dijitaalka ah, taarikadaani waa lagama maarmaan, qiimo jaban oo aad caan u ah.
ka dareemayaasha sidoo kale waxay noqon doonaan lagama maarmaan, laakiin xaaladdan waa inaan dulqaad badan yeelannaa iyo anaga oo og sida loo doorto dareemaha si fiican maadaama ay noqon doonto gurigeena caqliga badan, oo shaqeynaya maalintii oo dhan, 365 maalmood sanadkii, taas oo macnaheedu yahay in nooc kasta ama nooc shucuur ah uusan shaqeyn doonin.
Mustaqbalka otomaatiga guriga waa inuu ku shaqeeyo amarrada codka, laakiin hadda taasi kama shaqeyneyso dhammaan qeybaha iyo waxyaabo badan oo aan u baahanahay inaan helno taleefan casri ah oo internetka laga heli karo. Guud ahaan, waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'Android smartphone' maadaama shirkado badan oo ka shaqeeya nidaamkaan ay ka shaqeeyaan marka loo eego macruufka Apple ee Apple.
Mashaariicda Raspberry Pi
Maxaan sameeyaa si aan u abuuro laydh caqli badan?
Iftiiminta otomaatiga guriga waa waxa laga yaabo in inta badan la gaadhay sannadihii la soo dhaafay. Dhab ahaantii waan haynaa moodooyinka kala duwan ee nalalka casriga ah ee lagu dhejin karo nal kasta iyo xiriir wanaagsan, waxaan beddeli karnaa iftiinka oo waxaan abuuri karnaa deegaanno kala duwan iyadoo kuxiran waqtiga maalinta ama dhadhankeenna. Xilligan laambadahan casriga ahi waxay ku kacayaan qiime aad u weyn, taas oo macnaheedu yahay in qof kastaa uusan awoodin inuu yeesho dhammaan nalalka noocan ah.
Beddelka tan ayaa ah in la isticmaalo Nalalka hogaamiya RGB oo ku xir iyaga guddiga Arduino Yun, tan waxaan ku xakameyn karnaa nalka qolka gurigeenna. Nalalka hogaamiya RGB ayaa aad uga raqiisan guluubka casriga ah qaabka aan bixin karno ayaa ka xiiso badan kan guluub dhaqameedka ah, laakiin waa run in guluubka caqliga lihi uu leeyahay rakibid deg deg ah oo fudud.
Maxaan sameeyaa si aan u hubiyo otomatigayga gurigayga?
Amniga guriga waa wax jilicsan oo waliba aad muhiim u ah. Waqtigan xaadirka ah, si loo abuuro otomatiga guriga waxaa jira mashaariic kala duwan oo qufullo caqli leh oo lagu furayo faro ama taleefan casri ah.
Tallaabada labaad waxay noqon laheyd in lagu daro dareemayaasha dhaqdhaqaaqa ee qolalka oo dhan si ay u abuuraan alaarmiga guriga, laakiin mashaariicdani wali si sax ah uma socdaan. Sikastaba xaalku ha ahaadee, nabadgelyadu wali waxay sugeysaa otomaatiga guriga in kastoo aan ogahay in badan oo guryahooda aan caqliga lahayn ay isku dhibaatooyin qabaan
Maxaan sameeyaa si aan gurigayga u-qaboojiyo?
Qaboojiyaha ee guriga domotic waa wax adag, laakiin sidoo kale wuxuu ku jiraa guri caadi ah. Marka hore waa inaan hubinaa in guriga si fiican loo dahaadhay. Tani waa muhiim maxaa yeelay daqiiqado badan halkaas oo aan ka faa'iideysan doonno qaboojiye caqli leh guriga ma joogi doonno iyo haddii aan si fiican loo daboolin, waxaan ku lumin doonaa kuleylka ama qaboojiyaha qaab aan faa'iido lahayn oo aan lahayn natiijada la rabo.
Mar alla markii aan go'doominno guriga otomatiga guriga, waa inaan ku rakibnaa dareemayaal guddiga Arduino Bluetooth qol kasta. Macluumaadka heerkulka waxaa loo diri doonaa kombuyuutarka dhexe ama Raspberry Pi. In Raspberry Pi waxaan u isticmaali doonaa algorithms sidaas marka qolku gaaro heer kul gaar ah qaboojiyaha ama kululaynta ayaa la hawlgelinayaa.
Marka la eego dhinaca otomatiga guriga way adagtahay in la gaaro maadaama qaboojiyeyaasha iyo kuleyliyayaashu aysan caqli lahayn tan kaliya ee lagu badalan karaana ay tahay in la doorto xalalka lahaanshaha ee qaaliga ah oo aan aad ula jaan qaadi karin tikniyoolajiyadda kale. Sikastaba xaalku ha ahaadee, inyar oo kayar ayaa horumar laga sameeyay dhinacan ka mid ah otomaatiga guriga.
Maxaan sameeyaa si aan gurigayga u qurxiyo?
Markii hore waxaan ka soo hadalnay sida loo habeeyo nalka ama halkii loo yeelan lahaa laydh caqli badan. Waxaan sidoo kale abuuri karnaa dun muusig ah oo ku xiran nalalka, sidaas awgeedna aan u abuureyno deegaanno isku daraya nalalka iyo muusikada. Xalka ugu dhaqsaha badan kiiskan wuxuu leeyahay afhayeen caqli badan.
Dhankaan waxaa jira moodooyin badan oo aan soo iibsan karno sida Amazon Echo, Google Home ama Sonos. Laakiin waxaan sidoo kale abuuri karnaa afkeena caqliga badan. Waxaa jira mashaariic badan oo isku dayaya inay abuuraan afhayeenka caqli badan. Marka dhinacan laga eego, codbaahiyaha ayaa taagan. Google ayaa la siisay Raspberry Pi Zero. Xal xoog leh, bilaash ah oo ka raqiisan kuwa ku hadla qaar caqli badan. Haddii aan doorano xalka bilaashka ah, waa inaan maskaxda ku hay inaan u baahan doonno keyd ballaaran oo aan ku keydinno muusikada.
Sidee loo heli karaa khamriyeene otomatigayga gurigayga?
Waxaa la yaab leh, mid ka mid ah dhinacyada ugu wanaagsan ee lagu guuleystay otomaatiga guriga ayaa ah abuuritaanka caawiyeyaal dalwad leh. Guushoodu waxay noqotay in loo keenay taleefannada casriga ah, kiniiniyada iyo aalado kale.
Si loo helo butler ama caawiye kalkaaliye ah waa inaan haysanaa Sirdoon Artificial ah oo lagu rakibay serverka dhexe ama sabuuradda Raspberry ee kuxiran dhamaan aaladaha casriga ah. Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo bilaash ah sida Jasper o Mycroft ama waxaan sidoo kale dooran karnaa xalalka lahaanshaha sida Alexa oo laga helo Amazon Echo ama Google Assistant oo ka socda Google Home. Xulashada adigaa iska leh.
Tan ma la horumarin karaa?
Dabcan waa la horumarin karaa. Dhinacyo badan oo aan soo sheegnay waxay haystaan ​​qollo badan oo horumarineed laakiin kuwa kale oo aynaan tilmaamin, sida loo iftiimiyo, sidoo kale waxaa jira meel loogu talagalay hagaajinta iyo qaabeynta.
Wax walba waxay ku xirnaan doonaan nafteena, gurigeenna iyo dabcan aqoonteenna leh Qalabka Bilaashka ah. Xaalado badan waxaan abuuri karnaa aalado shaqsiyeed oo caqli badan oo xallinaya dhibaato ama ka dhigi kara otomatiga guriga mid caqli badan, waa kan ugu fiican Qalabka Bilaashka ah Miyaanay kula ahayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Sida loo abuuro otomaatiga guriga talaabo talaabo ah
Shaqo wacan wax badan ayey i caawisay
Abuur luqaddaada si aad uhesho turjubaan koodh ah